Ing. Faysal Cali Waraabe “Somaliland kuma jirto road mapka, shirka odayaasha beelaha Muqdisho uga furmayana shuqul kuma leh” | Anti-Tribalism
← Qaladka ugu wayne ee Dastuurku Waa Federalism! Nidaamka Federaalku Xal uma ahan Dhibaatada Soomaalida
Afgooye aad ama Afweeyne raac ama Afkaaga hayso ” →
Ing. Faysal Cali Waraabe “Somaliland kuma jirto road mapka, shirka odayaasha beelaha Muqdisho uga furmayana shuqul kuma leh”
05.05.2012 – Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID Ing. Faysal Cali Waraabe ayaa sheegay inaysan Somaliland qeyb ka aheyn qorshahaha la magac-baxay khariiradda nabadeynta Soomaaliya, waxaanu sheegay inay Somaliland ku jirin Salaadiinta beelaha wax ka dhisaya dowladda cusub ee loo yagleelayo dalka Soomaaliya.
“Somaliland kuma jirto qorshaha khariiradda Nabadda ee lagu soo saxiixay Ugandha Muqsdisho, iyo Garowe, sidaasi darteed, Salaadiin uma direyso Muqdisho si ay wax uga soo magacaaban wakiiladda cusub, waayo horena uguma jirin, haddana kuma jirto qorshaha khariiradda Nabadda” ayuu yiri Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID.
Guddoomiyuhu wuxuu xusay in go’aamadii ka soo baxay shirweynihii London uu ku jiray qodobka lixaad oo dhigayey in Somaliland ay wadahadal la yeelato dawladda TFG-da ama cidii bedesha, hase yeeshee wuxuu carabaabay inaan taas macnaheedu aheyn inay Somaliland la midoobayso Somalia.
“Wadahadalka ay Somaliland la yeelaneyso mucnihiisu ma ahan inaan Soomaaliya ku biireyno oo aan dib ula midoobeyno, laakiin waa inaan kala hadalnaa wixii danteena ay ku jirto labada dalba, shacabka Somaliland waa inay ogaadaan in Soomaaliya aysan dib dambe ula midoobi doonin, isla markaasna ay iyagu yihiin dowlad ka madax-banaan” ayuu yiri Ing. Feysal Cali Waraabe.
Hadalka Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka UCID Ing. Faysal Cali Waraabe ayaa ku soo aadaya xili odayaal dhaqameedyo ka yimid degaanada Somaliland ay ka qeyb galayaan shirka odayaasha dhaqanka beelaha soomaalida manta uga furmaya magaalada Muqdisho kaasoo lagu soo xulayo ergooyinka ansixinaya dastuurka cusub ee dalka, waxaana soo baxaya warar sheegaya in magaalada hargeysa lagu xirxiray odayaal dhaqameedyo kale oo ku soo jeeday magaalada Muqdisho.